पा’पी आमा जसले ३ सन्तानलाई काखमा राखेर दुध खुवाउँदै, खेलाउँदै मा’रिन् ! «
पा’पी आमा जसले ३ सन्तानलाई काखमा राखेर दुध खुवाउँदै, खेलाउँदै मा’रिन् !
Published : 24 January, 2020 2:05 pm
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने याे दुख’मय घ’टना जाे आमालाई भगवानको रुप मानिन्छ तर हालै यस्तो घ’टना सार्वजनिक भएको छ जसमा एक आमाले आफ्ना ३ सन्तानलाई त’ड्पाएरै मा’रेकी छिन् । बच्चाहरु छ’ट्पटा’उँदै मृ’त्युको मुखमा पुगे तर आमाको मन पग्लिएन । घ’टना अमेरिकाको एरिजोना राज्यको भएको त्यहाँको मिडिया एजेड सेन्ट्रलले लेखेको छ । महिलाले पुलिसको अगाडि आफ्नो अपरा’ध स्वीकार गर्दै तीनै जना बच्चालाई त’ड्पाइ–तड्पा’इ मा’रेको बताएकी छिन् ।
रिपोर्टका अनुसार महिलाको नाम रचेल हेनरी हो र उनी २२ वर्षकी छिन् । उनी ला’गूऔ’षधको दु’र्व्यसनी भएको बताइएको छ । उनले पुलिसलाई आफैं सबै कहानी बताएकी हुन् । उनले तीनैजना बच्चालाई काखमा राखेर दुध खुवाउँदै, खेलाउँदै घाँ’टी र नाक थि’चेर मा’रेको बताएकी छिन् । उनले एक–एक गरी तीन जना बच्चालाई पालै-पालो मा’रेकी थिइन् । बच्चाहरुमध्ये ३ वर्षका छोरा, २ वर्षकी छोरी र ६ महिनाकी छोरी भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उनले ६ महिनाकी छोरीलाई समेत पहिले काखमा राखेर दूध खुवाएको त्यसपछि गीत गाउँदै खेलाउँदै घाँ’टी थि’चेर मा’रेको बताएकी छिन् ।
रचेलका अनुसार उनले ह’त्यापछि सबै श’वलाई लिभिङ रुमको सोफामा सुता’एकी थिइन् । उनले घरका अन्य सदस्यलाई बच्चाहरु सुतेको बताएकी थिइन् । बच्चाहरुको शरीरमा कुनै हलचल नदेखेपछि घरका अन्य सदस्यले इमरजेन्सी नम्बरमा फोन गरेका थिए त्यसपछि पुलिस पुगेको थियो ।
उनकाे एक सद्स्य अनुसार उनी ड्रग्स’को लतमा डुबि’सकेकी थिइन् र विगत केही दिनदेखि अनौठो क्रियाकलाप गरिरहेकी थिइन् । उनले बच्चाहरुको ह’त्याको पछाडिको उद्देश्य भने बताएनन् ।
घरका एक सदस्यका अनुसार उनी ड्रग्स’को लतमा डुबि’सकेकी थिइन् र विगत केही दिनदेखि अनौठो क्रियाकलाप गरिरहेकी थिइन् । याे घ’टनाले संसारलाइ दुखि बनाएकाे छ । आफुले जन्म देकाे बच्चालाइ आफ्नै हात बाट मा’रेकाे खबर अदालतले सुन्दा अदालत नै अच्ममित भएकाे छ ।